Mpandraharaha Afrikana Tatsimo : Vonona hampiasa ny volany eto Madagasikara -
AccueilRaharaham-pirenenaMpandraharaha Afrikana Tatsimo : Vonona hampiasa ny volany eto Madagasikara
16/06/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Fahombiazana. Nofaranana tamin’ny fanaovan-tsonia ny antontan-taratasy mirakitra ny fahavononan’ny governemanta roa tonta eo amin’ny fiaraha-miasa ny fihaonamben’ny mpampiasa vola ho an’i Madagasikara, notanterahina tatsy Afrika Atsimo nandritra ny roa andro. Roa andro izay nanaovana atrikasa sy fihaonana maromaro ka nisian’ny fifanakalozana sy fampahafantarana ho an’ireo mpampiasa vola ireo sehatra samihafa momba ny fampiasam-bola sy ny fandraharahana amin’ny ankapobeny eto Madagasikara. « Anisan’ny firenena tian’ireo mpampiasa vola hampiasana ny volany sy ifandraharahana i Madagasikara », araka ny fanamarihan’ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina. Fantatra fa efa hisy sahady ireo mpampiasa vola afrikana tatsimo no ho avy eto Madagasikara ary hisy ihany koa ny fifanarahana hatao sonia. Nandritra ny fihaonana teo amin’ireo samy mpandraharaha na teo amin’ireo minisitra voakasik’ireo tetikasa ilaina mpamatsy vola sy ny mpandraharaha, dia noezahina hatrany ny fampahafantarana azy ireo ny zava-misy eto Madagasikara, ny sehatra samihafa azon’izy ireo ampiasaina vola, ny toetry ny tontolo ara-toekarena sy ara-barotra eo amin’ny Madagasikara ary ny fandraharahana eto amintsika. « Tsy hifarana eto anefa fa tsy maintsy hitohy ary tsy maintsy ho tanteraka ary hiandrandrana vokatra tsara amin’ny ho avy ireo tetikasa voadinika taty», araka ny fanamarihana nataon’ ny filoham-pirenena raha namarana ity fihaonana ity izy, omaly. Nomarihin’ny filoham-pirenena hatrany ny hisian’ny fandraharahana ho an’ny tombontsoan’ny rehetra nitondrany fanamarinana fa «vonona ny hanatsara ny toekareny amin’ny firoboroboan’ny mpamatsy vola i Madagasikara na eo amin’ny fotorafitrasa, ny angovo, ny fizahantany, ny fambolena sy fiompiana ary ny indostria… ary amin’ny sehatr’asa hafa voadinika nandritra ity fihaonana ity ».
Nandritra ny fivahinianany, nihaona tamin’ny filoham-pirenena Afrikana Tatsimo, Jacob Zomba ihany koa ny filoham-pirenena Malagasy Hery Rajaonarimampianina. Fihaonana izay midika ho fahamatorana eo amin’ny fifandraisana eo amin’ny filoha sy ny firenena roa tonta. Midika ihany koa fanohanana ireo sehatra tsy miankina amin’ny fisian’ny fahatoniana amin’ny fandraharahana. « Antoka ho an’ny fampiasam-bola eto Madagasikara ny fisian’ireo sehatra tsy miankina amin’ny sehatra samihafa izay manana ny zava-bitany sy izay ho vinavinany. Vavolombelon’ny zava-misy sy ny fahatoniana ary ny fahazoana tombontsoa izy ireo ary miaro azy ireo amin’ny fampiasam-bola ataony ny governemanta», hoy hatrany ny filoham-pirenena, raha nitodika tamin’ireo mpampiasa vola Afrikana Tatsimo.
Rocco Rasoanaivo ( Pretoria Afrika Atsimo) – Miarantsoa